Vaovao - Ny fiakaran'ny vidin'ny kobalt dia nihoatra ny andrasana na hiverina amin'ny ambaratonga mirindra
Tamin'ny telovolana faharoa tamin'ny taona 2020, 16800 taonina ny totalin'ny importa ho an'ny kobalta, miaraka amin'ny fihenan'ny 19% isan-taona. Anisan'izany, ny totalim-bidy avy amin'ny koba koba dia 0100 taonina taonina vy, miaraka amin'ny fihenan'ny 92% isan-taona; ny totalin'ny fanafarana vokatra afovoany an'ny hydrometallurgy kobalt dia 15800 taonina ny taonina vy, miaraka amin'ny fihenan'ny 15% isan-taona; ny totalin'ny fanafarana kobalt manta dia taonina vy 0800 taonina, miaraka amin'ny fiakarana 57% isan-taona.
Niakatra be ny vidin'ny kobalta amin'ny tsena anatiny. Hatramin'ny tapaky ny volana jolay dia nitombo efa ho 10% - 11% ny vidin'ny kobalt electrolytic, cobalt sulfate ary cobalt chloride izay avo kokoa noho ny tamin'ny volana jona lasa teo. Ny fiakaran'ny vidin'ny koba electrolytic, kobalta sulfate ary kobalta klôroida manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Jona dia eo amin'ny 3-4% fotsiny.
Fiovan'ny vidin'ny vokatra kobalt SMM manomboka amin'ny 8 Mey ka hatramin'ny 31 Jolay 2020
Taorian'ny tapaky ny volana jona, ny vidin'ny koba electrolytic ho an'ny kobalta sulfate dia mitombo tsikelikely amin'ny 1, indrindra noho ny filan'ny fitaovana bateria
Fampitahana ireo vokatra kobalta SMM manomboka amin'ny 8 Mey ka hatramin'ny 31 Jolay 2020
Nanomboka tamin'ny Mey ka hatramin'ny Jona tamin'ity taona ity, ny antony tokana manohana ny fiakaran'ny vidim-piainana dia ny fanakatonana an'i Afrika atsimo amin'ny volana aprily, ary ny tsy fahampian'ny akora kobalta anatiny manomboka amin'ny Mey ka hatramin'ny Jona. Na izany aza, ny votoatin'ny vokatra fandrorana an-tsena dia mbola be loatra, nanomboka ny fiparitahan'ny kobaaltate sulfate tamin'ny volana de stocking, nohatsaraina ny fototra. Ny fangatahana ambany dia tsy nihatsara, nanindry ny fangatahana elektronika nomerika 3C ho amin'ny fividianana vanim-potoana, kely ny fiakarana.
18650 Nimh, 3.7 bateria azo haverina, Lithium Ion Polymer Battery, Battery bateria azo averina 12v Lithium, Li Battery, Kitapo bateria Lithium azo haverina 12 Volt, Vokatra rehetra